Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo cambaareeyay weerarkii lagu qaaday ciidamada Itoobiya ee saldhiga Halgan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeHomeXoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo cambaareeyay weerarkii lagu qaaday ciidamada Itoobiya ee saldhiga Halgan
June 11, 2016 Puntland Mirror Home, Somalia 0
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa cambaareeyay weerarkii Khamiistii lagu qaaday saldhiga ciidamada Itoobiya oo katirsan Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, saldhigaas oo ku yaala deegaanka Halgan ee bartamaha Soomaaliya.
“Xoghayaha Guud wuxuu ugu yeerayaa dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda in ay meel uga soo wada jeestaan dagaalka ka dhanka ah xagjiriinta al-Shabaab,” sidaa ayuu Xoghayaha ku yiri bayaan uu soo saaray afhayeenka Banki-moon.
“Wuxuu markale ugu celiyay Qaramada Midoobay taageerada aan laba-labaynta lahayn iyo dadaalada loogu dhisayo Soomaaliya nabad-buuxda iyo xasilooni,” sidaa ayuu sidoo kale bayaanka ku yiri.
Mr. Ban ayaa sidoo kale tacsi u diray qoysaskii kuwii ku dhintay weerarka wuxuuna u rajeeyay soo kabasho deg deg ah askarta dhaawacantay.
(Warkan Waxaanu kasoo xiganay, UN News Centre, waxaa turjumay Puntland Mirror)
July 16, 2016 Madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray caasimada Rwanda ee Kigali si uu uga qayb galo shir madaxeedka Midowga Afrika
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirka Arrimaha Gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Siciid Juxa ayaa shaqo joojin ku sameeyay xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda Yaxye Cali Ibraahim. Digreeto kasoo baxday Wasiir Juxa maanta oo Sabti ah oo [...]
New York-(Puntland Mirror) Dowladda Soomaaliya ayaa mar labaad ku celisay codsigeeda hoggaamiyaasha caalamka si cuno qabataynta caalamiga ah looga qaado, iyadoo ay khatar dalka kaga imaanayso maleeshiyada hubaysan ee Al-Shabaab. Isaga oo khudbadiisa u jeedinayay [...]
Diyaarado aan la aqoon cida leh oo duqeeyay deegaanka Galgala Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) diyaarado dagaal oo aan la aqoon cida iska leh ayaa lagu soo waramayaa in ay duqaymo ka sameeyeen deegaanka buuralayda Galgala ee gobolka Bari Puntland, Soomaaliya. Duqaymaha ayaa la fuliyay maalmihii Arbacada iyo [...]